somalimidnimo.com » Faroole oo Damcay inuu Xildhibaan C/Weli Gaas ka Raafo Boosaaso!
Faroole oo Damcay inuu Xildhibaan C/Weli Gaas ka Raafo Boosaaso! Oct 31, 2012 - 3 Comments	Sida wararku sheegayaan beryahanba wuxuu Faroole damacsanaa inuu soo raafo xildhibaan C/Weli Gaas! Mar horaba dad iyo wariyaal soo dhoweyn lahaa C/Weli Gaas ayaa PIS u diideen inay soo dhoweeyaan. Waxaa maanta Boosaaso kula hadlay guddoomiyaha gobolka Bari, duqa degmada, iyo taliye Afdalow. Waxay u sheegeen inay jirto codsi ka yimid madaxtooyada Puntland in C/Weli ka baxo magaalada Boosaaso maaddaama uu faraha kula jiro shirar uu la leeyahay odayaasha, ganacsatada, iyo shacabka Boosaaso!
Xildhibaan C/Weli Gaas wuxuu ku doodayaa inuu ka soo jeedo Puntland uuna yahay xildhibaan Soomaaliyeed oo matalaya shacabka Puntland mana jirto sabab looga raafo Boosaaso!
Faroole muddo badan buu dadweyne Soomaaliyeed oo Koonfurta ka yimid ku hayey uma dhalan Puntland! Waxaa hadda la raafayaa reer Mudugii Puntland!
Waxaa suuqa lagu kaftamayaa in nin faaliye ah ku yiri Faroole: haddaad Puntland ku sameysid muddo-kororsi, sidii C/Laahi Yuusuf oo kale baad noqoneysaa madaxweyne Soomaaliyeed! Marka aan eegnno meesha arrimuhu sal dhigtaan! Mar horaba Faroole wuxuu geeska gashay Suufiyaashii; isagoo soo dhoweystay Ictisaam.
« PreviousTaliyihii Horgalka U Ahaa Ciidamada Shisheeye Oo Beledweyne Lagu Dilay Muumin Il-dhigte	Next »Sacuudiga 25 Qof Oo U Dhintay Qarax Koronto Kadib Markii Rasaas Dabaal Dig Aroos Loo Ridayey Ay Koronto Qarxisay.	3 Responses
Abuufatima says:	October 31, 2012 at 3:33 pm	Kanu waa Mahigee
Midka kanina waa kuma
makanaadan garan karin
Muftigiisi wee yee
Maad maqal miyaa
Markhaatiga u keensaday
Ku ismee muftiga yiri
Mufti yuu u yahayoo
Loogu magacdaroo hore
Gaalada madaw iyo
Mooryaanta reer yurub
Hadba kii u muruq wayn
Masruufkaana ka iibsada
Yuu kanu mufti u yahay
Reply	Abuu cumar says:	October 31, 2012 at 7:43 pm	War dag daga oo muslimiinta ku farxaan gaalada iyo murtadiintana ka nixiya.
Gaalka wasiir ku xigeenka arimaha dibeda u ah Kenya ninka lagu magacaabo Richard Onyonka oo la hadlaayey jariidada lagu magacaabo Daily Nation.
Waxa uu maanta afkiisa ka qirtey in dowlada kiristankaa ee Ugandha ee dalkeena ku soo duushey in shabaabul mujaahidiin eey ka dileen 2700 askari oo ugaandhees ah .
2700 ayeey qirteen marka inteey qaraniyaan ayeey idinla tahey ,suaashaas idinkaan idiin daayey.
Dhinaca kenya waxuu yirri ilaa afartameenyo ayaa noooga baqtisey soomaaliya, taasna waa fahmi kartaan inuuna run ka sheegeen
Reply	waheliye_3 says:	October 31, 2012 at 8:56 pm	Kkk Cajiib!! –Xataa Anaa miyay mareysaa?
Abu faadumoow falaad xumida ina faroole
Waa Fircownkii seexdaye Haamaan fiiri dalka yiri
Ee Habar fajacsanoo Hashii fiidmalka caruurta
Baqtigeedii fagaaraha keentee Aaway tiri ficoon
Fariidkii Allaha noo ahaa Nafta ha’iigu Afuufee
Farsamaduu ogaa Haaman iyo falka beentaaye
Khalqi cusub falkintii Ayuu ufadhiyaa fircowne
Furo hashiisan fiican asna fiidka tan hanooleyo
Ficilkii dhacay markii foolxume fircon loo sheegay
Fududaatay Haamaanoow’e maxaadan iigu foorin
Waaba fahmeysnaaye horaan ka fariisin lahaa hashee!
Hamaanoo Anfariir fajacaa kuyiri xataa ana yaa fircoon!!
Hadda faroole fadeexaddii tarxiilka ina Gaas kufariisiyay kk
Warka Balo Hadde waa Annagii Boowe ahaa,,Cajiib kkk